Semalt: Kuvhara A Site Pamutambo Wenyu Kana Android Phone
Ungave uri kuchengetedza mwana wako kana kuvanza ruzivo rwemunhu oga, pane dzimwe nzira dzekudzivirira masayiti asina kudiwa kubva pakombiyuta yako kana shandura. Vanhu vazhinji vane hanya nehutano hwavo hwekutsvaga uye vanoda kuvhara mamwe mawebhusayithi kuitira kuti vana vavo nevana vavo vakwanise kuchengeteka. Dzimwe mawebhusayithi anogona kunge ane uye anoparadzira mavairasi, malware, uye bots. Pane mikana yokuti ichange ine zvinyorwa zvinoshungurudza kana mumwe munhu angaba mashoko ako ega. Zvechokwadi, unogona kudzivisa nzvimbo idzi, asi iyo haisi yekusingaperi, uye iwe unofanira kutora matanho makuruwo.
Vhura Webhusaiti paWindows Makombiyuta:
Max Bell, the Semalt Mutengi Achibudirira Mutariri, anotaura kuti pane nzira dzakawanda dzekuvhara webhusaiti, uye iwe unogona kusarudza nzira yakagadziriswa neshanduro yako, network network, uye yose inoshandiswa system - buy pet accessories online. Chinyorwa chikuru cheIndaneti ndiyo DNS system inoshandura nyore uye nyore kurangarira mazita akadai se www.google.com uye IP adresses. Paunenge uri kushandisa seDNS server kuti uende kune zvikwangwani, kombiyuta yako ichava nechimwe chinhu chinozivikanwa seIndaneti faira. Iyi faira inoshandiswa pakudzivisa kusvikidzirwa kwemasayiti ane peji. Nzira inotevera inoshanda kune vose Windows 7 uye Windows 8 vashandisi:
Unoda kuwana chikamu chemugadziri wekombiyuta yako uye chengetedza uchishandisa zita rako rekushandisa uye password, uye enda kuC: \_ Windows \_ System32 \_ drivers \_ etc.
Tsvaga pane mazita ane mazita uye sarudza Notepad kubva pane mapurogiramu. Dzvanya pakutinho yeOk uye shandisa faira.
Pakuguma kwefaira iyi, unofanira kuisa URL dzaungada kudzivisa. Nokuda kweizvi, unogona kuwedzera mitsetse mishoma pamagumo epa faira, ne 127.0.0..2. Zvino unofanira kunyora zita rewebsite uye ita kuti rivhare.
Vhura nzvimbo pafoni yako yeAsset:
Kumunhu anoshandisa Android, kune mazano mashomanana uye zvinhu zvekuyeuka. Kana iwe uine foni yakadzika, semuenzaniso, unogona kuvhara masayiti nyore nyore nekugadzirisa maFomu eHhodhi pachokushandisa uye kutungamira hackers kune mamwe mapeji ewebhu. Nokuda kweizvi, iwe uchada maneja wefaira uye mharidzo yemutauro. Nzira yakanakisisa ndiyo kushandisa ES File Explorer, iyo inotitendera kuita mabasa akawanda panguva imwechete.
Isai ES File Explorer uye tapota bhokisi re menu pane.
Muchikwata chefaira, unogona kuona faira inonzi maHondo. Iwe unofanirwa kuinyorera uye enda kumapop up menu. Pano iwe unofanirwa kusvika kuS Note Editor sarudzo.
Tora kuti kuchinja bhatani uye shandisa faira. Pano iwe unofanira kutora ma URL uye mazita ewebsite unoda kuvadzivirira.
Usakanganwa kutamisazve DNS yavo, uye chengetai 127.0.0.2 www.blockwebsites.com mumutsara mutsva.
Dzorera foni yeIndamusi kana waita zvinhu zvataurwa pamusoro
Kana iwe uchinzwa kuti iyi nzira yakanyanya kuoma, unofanira kuisa maitiro antivirus akaita seTend Micro ayo achakuregedza kubvisa mawebhusayithi ane hanya nemazvo. Iwe unongotanga kuisa iyi purogiramu uye iite iyo. Endai kune Zvasarudzo> Nzvimbo yakachengeteka uye shandura kuParental Controls. Pano iwe unofanira kutora uye kugadzira nhoroondo. Kana kambani iyo yakasikwa, iwe unogona kuitumidza seZvodzwa Lists mubasa rako uye wobva wawedzera mawebhusayithi iwe unogona kuvhara panguva.